नेपाली सेनाद्धारा उम्मेद्धवारको घरबाट बम निष्क्रिय
कटारी, १० असार । उदयपुरको कटारी नगरपालिकाको वडा नम्बर ४ स्थित् विद्यालय छेउमा नेपाली कांग्रेसका वडाअध्यक्षको उम्मेद्धवार राजिव थापाको घरमा फेला परेको बम आज नेपाली
बैतडी, ९ असार । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगनकुमार थापाले नेपालमा आर्थिक समृद्घि ल्याउने पार्टी नेपाली काँग्रेस रहेको बताउनुभएको छ । आज बैतडी र दार्चुला कांग्रेसले संयुक्तरुपमा गोकुलेश्वरमा आयोजना गरेको
५ नं. प्रदेशको राजधानी बुटवल हो : विष्णु पौडेल
काठमाडौं, ९ असार । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव विष्णु पौडेलले ५ नं. प्रदेशको राजधानी बुटवललाई बनाउने दाबी गरेका छन् । शुक्रबार बिहान नेपाली रेडियो नेटवर्कमा पत्रकार ऋषि धमलासँग
चुनाव बिथोल्न खोज्ने पाँच जना पक्राउ
पाँचथर, ९ असार । चुनाव विरोधी गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पाँचजना कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा ताप्लेजुङ साब्लाखुका मुस्कान लिम्बू, फाल्गुनन्द–४ का विजय नेम्वाङ,
नवनियुक्त महाप्रबन्धक र सञ्चालक समिति सदस्यलाई स्वागत तथा बधाई
काठमाडौँ, ८ असार । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का कर्मचारी सङ्घ सङ्गठनले नवनियुक्त महाप्रबन्धक तथा सञ्चालक समिति सदस्यलाई स्वागत तथा बधाई कार्यक्रम गरेको छ । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन (रासस), रासस
मन्त्रिपरिषद बैठक बालुवाटारमा सुरु
काठमाडौं, ८ असार । मन्त्रिपरिषदको बैठक सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बैठक सुरु भएको हो । बैठकमा असार १४ गते हुने स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनको तयारी
गैरकानुनी संरचना हटाउन मुख्यमन्त्रीसँग राजदूत उपाध्यायको आग्रह
काठमाडौँ, ७ असार । सरकारले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा बनारसको ललिताघाट परिसरमा गैरकानुनीरुपमा निर्मित संरचना हटाउन उत्तरप्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेको छ । भारतका लागि नेपाली राजदूत दिपकुमार उपाध्यायले आज त्यहाँका मुख्यमन्त्री
भारत र वेलायतले एकपक्षीय रुपमा गरेको १९४७ को सन्धि–सम्झौता खारेज गर्न माग
काठमाडौं, ७ असार । ब्रिटिस–गोर्खा भुतपूर्व सैनिक संघ (बिगेसो) ले भारत र वेलायतले एकपक्षीय रुपमा गरेको १९४७ को सन्धि–सम्झौता खारेज गर्न माग गरेको छ । बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा ब्रिटिस
विकासका लागि क्रियाशीललाई निर्वाचित गर्न आग्रह
सुरुङ्गा (झापा), ७ असार । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगनकुमार थापाले सबै दलको अबको कार्यसूची सामाजिक र आर्थिक विकास हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । आज बिहान बिर्तामोडमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उहाँले
समाजमा विभेद ल्याउने कुरा नगर्न सुझाव
ताप्लेजुङ, ६ असार । नेपाली काँग्रेसका युवा नेता गगनकुमार थापाले निर्वाचन जित्नकै लागि मात्र समाजमा विभेद ल्याउने प्रकारका कुरा नगर्न आफ्ना उम्मेदवारलाई सुझाव दिनुभएको छ । सोमबार रासससँग कुरा गर्दै
काठमाडौँ, ५ असार । प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)का महासचिव अम्जाद हुसैन बी साइलले भेटवार्ता गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
मुलुकको समृद्धि र विकास काँग्रेसबाट मात्रै सम्भव : डा महत
पाँचथर, ४ असार । नेपाली काँग्रेसका नेता डा रामशरण महतले मुलुकको समृद्धि र विकास काँग्रेसबाट मात्रै सम्भव भएकाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्ना पार्टीका उम्मेदवारलाई विजयी गराउन सबै मतदातालाई आग्रह गर्नुभएको